Ayithi vu i-ANC ngezizathu zokuketulwa kukaJacob Zuma | News24
LAST UPDATED: 2018-11-18, 16:15
Ayithi vu i-ANC ngezizathu zokuketulwa kukaJacob Zuma
Johannesburg - I-African National Congress (ANC) ayithi vu ngesizathu sokunquma ukususa uJacob Zuma esikhundleni.
Inhlangano ithe uma kunezinxushunxushu izobhekana nazo ngokuzidingida ngqo noZuma, ngaphandle kokubandakanya abezindaba.
Ngesikhathi kuqhubeka ingxoxo phakathi kwabe-South African Broadcasting Corporation (SABC) noZuma ngoLwesithathu, uZuma ubelokhu esho njalo ukuthi ngesikhathi etshelwa ukuthi kumele ashenxe esikhundleni, akazange atshelwe ukuthi kungani.
UZuma uthe kuyaxaka ukuthi i-ANC ithi akehle esikhundleni kepha iyehluleka ukumtshela ukuthi yini le engaka ayonile.
Uqhube ngokuthi uma kungukuthi kukhona akwenzile, kungani pho kungalandelwa imigudu ekhona ngaphakathi kuKhongolose.
"Cha, angizange ngiyishaye indiva imiyalelo yenhlangano. Sekube nezinto eziningi ezenzekile nezikhulunyiwe. Mina bengingakalitholi ithuba lokuziphendulela ngenxa yokuthi ngikholelwa ekutheni izinto kumele zenzeke ngendlela ethize, hhayi ziphume kwabezindaba," esho ngoLwesithathu ntambama.
OLUNYE UDABA:IPhalamende lisalinde incwadi yokwesula kukaZuma
Owe-ANC uPule Mabe akafunanga ukuphawula mayelana nezizathu zokuketulwa kukaZuma.
"Bheka, simehlisile uZuma esikhundleni, usulile kanti ngokubuka kwethu lolu daba seluphothuliwe. Njengamanje simatasa ngokufungiswa kukamengamneli omusha wezwe.
"Angeke sisalokhu sikhuluma ngalo mbuzo sekuyisikhathi sokuqhubekela phambili."
UZuma umemezele ngoLwesithathu ebusuku ukuthi useyehla esikhundleni.